Consoles iyo muraayado wareegsan oo lagu qurxiyo laguna qurxinayo hoolka | Bezzia
Consoles iyo muraayado wareegsan si ay u goglan uguna qurxiyaan hoolka
Koonsole iyo muraayad wareeg ah ayaa ka samaysan tandem weyn oo leh goglan iyo qurxin hoolka. Console waa qalab fudud, miis loo sameeyay inuu gidaarka u dhaw yahay, inta badana aan lahayn khaanadaha iyo looxa labaad isla markiiba dhulka, kaas oo aan qaadanayn meel aad u badan.
Console-ka waxaad u baahan doontaa oo kaliya ku dar muraayad wareegsan iyo qalabyada qaarkood si aad hoolkaaga uga dhigto mid raaxo leh. Ma aha soo jeedinta ugu fiican ee kuwa u baahan in ay haystaan ​​meel weyn oo kayd ah oo dheeraad ah oo hoolka ah, laakiin dhammaan kuwa u baahan meel kaliya oo ay ku dhejiyaan furahooda marka ay yimaadaan, waraaqaha laga soo ururiyo sanduuqa boostada iyo galoofyada ama maro-gashiyada .
1. f. Miiska loo sameeyay inuu ku tiirsado gidaarka, inta badan aan lahayn khaanadaha iyo looxa labaad isla markiiba dhulka
Tani waa sida console-ka RAE u qeexayo, gabal aad u caan ah oo ka mid ah alaabta guryaha. Qayb ka mid ah alaabta guriga ee Bezzia waxaan aaminsanahay inay had iyo jeer tahay soo jeedin wanaagsan oo lagu qurxiyo, gaar ahaan, hoolalka ugu yar ama cidhiidhiga ah. Maadaama miisaskani ay inta badan leeyihiin qoto dheer oo aan ka badnayn 40 sentimitir.
Waxaa ka mid ah consoles-yada badan ee suuqa ku jira laba kuwaas oo aanad waligaa khaldami doonin, gaar ahaan haddii aad sharad ku gasho noocyada ugu yar ee isku mid ah. Oo waa maxay console-yadani? Kuwa gebi ahaan alwaax ka samaysan iyo kuwa loox iyo qaab-dhismeed bir ah leh. Labaduba waxay ku habboon yihiin dhammaan deegaannada, in kasta oo ay leeyihiin nuances yar oo ku saabsan midka ku habboon mid kasta oo iyaga ka mid ah.
consoles'ka alwaax. Koongarasyada alwaaxdu waxay daabacaan diirimaadka hoolka, nooc kasta ha ahaatee. Kuwa ka samaysan alwaax dabiici ah iyo qaababka dabiiciga ah waxay ku habboon yihiin kor u qaadida qaabka rustic ee guriga. Halka kuwa ugu cadcad ee leh khadadka toosan ay yihiin doorasho ku habboon in lagu qurxiyo labadaba jawiga caadiga ah iyo kuwa casriga ah.
Iyada oo qaab dhismeedka birta ah iyo dusha alwaax. Qaab dhismeedka macdanku wuxuu siinayaa hawo warshadeed consoles-yadan, marka lagu daro saamaynta iftiinkooda. Waxay ku habboon yihiin, sidaas darteed, si ay u qurxiyaan dariiqyada aadka u cidhiidhiga ah ee qaababka rustic iyo kuwa casriga ah labadaba.
Muraayadaha wareega ayaa isbedelaya mana aha oo kaliya qurxinta hoolka, waxay sidoo kale aad u soo jiidanayaan musqusha. Qaabkeeda wareegsan waxay jilcisaa khadadka leydi ahaan ee console-ka, taasoo ka dhigaysa albaabka guryaheenna mid aad u wanaagsan.
ka naqshadaha jir madow Waxay yihiin kuwa ugu caansan si ay u qurxiyaan muraayadaha noocan oo kale ah iyo, shaki la'aan, ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad ku dhejisid konsole leh qaab-dhismeedka birta madow sida qaybta ugu muhiimsan ee alaabta guriga. Si kastaba ha noqotee, sannadihii ugu dambeeyay, alwaaxyada alwaaxa ama bamboodu waxay heleen sumcad weyn, iyagoo ah kuwa ugu cadcad ee jawiga caadiga ah iyo kuwa la safeeyey.
Ma waxaad raadinaysaa deegaan ugu yar iyo jawiga casriga ah? Ka dib sharad ku samee xayndaabyo fudud oo caqli leh ama iska dhaaf. Haa, maanta dhib kama heli doontid muraayado aan qaab lahayn oo wareegsan. Ma aha kuwa ugu caansan laakiin waxay yihiin beddelka weyn, marka lagu daro jawiga hore loo sheegay, meelahaas oo aad rabto inaad siiso dhammaan caannimada alaabta guriga.
Dhawr qalab iyo qalab ayaa ku filnaan doona dhamaystirka dharka. Waxay ku kala duwanaan doonaan hadba baahida guri kasta iyo qoys kasta. Laakiin guud ahaan, gabal alaabta guriga ah waligiis ma dhaawici doono. baaquli ama dambiil si aad uga tagto furayaasha.
Haddii konsole-ku dheer yahay, waxa kale oo aad ku dari kartaa nal. Oo haddii aad u baahan tahay meel wax lagu kaydiyo xilliga jiilaalka si aad u geliso galoofyadaada ama cumaamado, ha ka welwelin inaad ku darto qaar ka mid ah console-ka hoostiisa. dambiilo fiber khudradda ah. Ma rabtaa talo? Haddii fikraddaadu tahay inaad dhigto dambiilaha, ku sharad miis leh shelf hoose; waad taageeri kartaa dambiisha tan oo nadiifi sagxada si raaxo leh adigoon u baahnayn inaad mar kasta dhaqaaqdo.
Ma jeceshahay isku darka consoles'ka iyo muraayadda wareegsan si ay u diyaariyaan oo u qurxiyaan hoolka oo kugu soo dhaweeyaan gurigaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Dharbaaxo » Consoles iyo muraayado wareegsan si ay u goglan uguna qurxiyaan hoolka
Cuntooyinka caawiya xakameynta sonkorta dhiigga